တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ခံစားရသော ကဗျာတပုဒ်
Thanks for your little brother's poem.
I feel something, but I don't know how to reveal my feeling.
မမေ...ကဗျာရှင်က ဘာအကြောင်းကိုဆိုလိုပြီးရေးလဲ မသိ...ညီမလေးကတော့ ဒီကဗျာကို ခု လက်ရှိခံစားနေရတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်စွာ ထပ်တူညီခံစားပြီး ငိုချင်တယ်... ကဗျာ ရေးဦးမှပဲ...
ka byar lay ka chit sa yar kg like tar, dar pay me,atwe twe pay khe dal byar.. ma may mg lay lo pe, ta cho dee lo ka byar lay twe lo khan sar kya ya hmar par..
ka byar shin ko yaw.. tin pay te ma gyi ma may yaw..
shwin lan chan myay par say ..
6/22/2007 12:41 PM
ကဗျာမူရင်းကိုလည်း ခံစားရတယ်။ မမေခံစားတာကိုလည်း ခံစားရတယ်။ မမေရယ်.. “မှားယွင်းတဲ့” ဆိုတဲ့ နာမ၀ိသေသနနဲ့ မအပ်စပ်သင့်တဲ့ “အချစ်စစ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွဲဆက်ကြည့်မိတဲ့အခါ.. ပိုနာကျင်ရပါတယ်။
‘မိုးရွာနေတယ်’ … တဲ့
6/23/2007 5:25 PM
ကဗျာက သိပ်ကောင်းတယ်။ မိုးရွာမယ်ဆိုတာ ကြိုသိတာ မဟုတ်ဘဲ မိုးများရွာလေမလားလို့ စိုးထိတ်တာမျိုးလဲ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
6/25/2007 2:32 AM